Ndị Taliban kwụsịrị ụgbọ elu niile si na ọdụ ụgbọ elu Kabul International
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Ndị Taliban kwụsịrị ụgbọ elu niile si na ọdụ ụgbọ elu Kabul International
Ndị agha Taliban na -eche nche n'ihu ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai, na Kabul, Afghanistan,
Ndị otu Taliban abịala nso n'ọdụ ụgbọ elu wee gbaa ọtụtụ ịdọ aka na ntị iji chụsasịa ndị mmadụ garuru ebe ahụ.
Ndị Taliban kagburu ọpụpụ niile n'ọdụ ụgbọ elu Kabul.
Ọdụ ụgbọ elu Kabul International "kwụsịtụrụ nwa oge".
A tụrụ aro ụgbọ elu niile ka ha ghara ife Afghanistan.
Ndị nnọchi anya Taliban kwupụtara taa na ọpụpụ nke ụgbọ elu niile si n'ọdụ ụgbọ elu Kabul International bụ "kwụsịtụrụ nwa oge" ruo mgbe amara ọzọ.
Dị ka akụkọ mpaghara si kwuo, ndị otu Taliban abịala nso n'ọdụ ụgbọ elu wee gbaa ọtụtụ ịdọ aka na ntị iji chụsasịa ndị mmadụ garuru ebe ahụ.
Tupu mgbe ahụ, a kagburu ụgbọ elu azụmahịa niile si n'ọdụ ụgbọ elu Kabul, ebe a tụrụ aro ụgbọ elu niile na -ebugharị ka ha tụgharịa ọzọ ma ghara ifefe Afghanistan. Na Tuesday, onye odeakwụkwọ mba ofesi Britain Dominic Raab kwuru na ọnọdụ ọdụ ụgbọ elu na -ada jụụ.
N'August 15, Taliban kwagara na Kabul wee nye ikike ịchị obodo ahụ n'ime awa ole na ole. Onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani gbadara, dị ka o kwuru, iji zere mwụfu ọbara wee gbapụ mba ahụ. Mba ọdịda anyanwụ na -achụpụ ụmụ amaala obodo ha na ndị ọrụ nnọchi anya ha.